यी हुन् श्रीमतीका प्रकार ,तपईकी कस्ती श्रीमती हेर्नुहोस ! - Nepal Insider
यी हुन् श्रीमतीका प्रकार ,तपईकी कस्ती श्रीमती हेर्नुहोस !
January 10, 2020 477
(२)चोरीसम (चोर) श्रीमती : श्रीमानले कमाएर दिएको धन मध्ये केही अंश लुकाउने श्रीमतीलाई चोरीसम श्रीमती भनिन्छ । यस्ती स्त्री पनि मरणपछि नरक जान्छे।
(३)भगिनीसम (बहिनी जस्ती): श्रीमती श्रीमानको सम्मान गर्ने, लज्जालु र पतिले भनेको मान्ने हुन्छे। यस्ती स्त्री पनि मरणपछि स्वर्गलोकमा जान्छे।
(४)मातुसम (आमा जस्ती) : श्रीमती आमाले छोरोको हित चाहे जस्तै सँधै श्रीमानको हित चाहने हुन्छे । प्राप्त धनलाई राम्रोसित सम्हालेर राख्छे । यस्ती श्रीमती सदाचार युक्त भएकीले मरणपछि स्वर्णलोकमा गएर सुख भोग गर्छे।
(५)आयासम (स्वामिनी) श्रीमती : केही काम नगर्ने, अल्छी, धेरै खाने, कठोर वचन बोल्ने, नोकरचाकरलाई अपमान गर्ने। यस्ती स्त्री पनि मरणपछि नरक जान्छे।
(६)सखीभरिया (साथी जस्ती) श्रीमती : श्रीमान देखेर प्रसन्न हुने, आफ्नो कुल परम्परा कायम गर्ने, शीलवती तथा पतिव्रता हुन्छे । यस्ती स्त्री पनि म’रणपछि स्वर्गलोकमा जान्छे।
(७)दासीसम (दासी जस्ती) श्रीमती : कहिल्यै नरिसाउने, शान्त स्वभावकी, दण्ड देखेर डराउने, श्रीमानको कुरा मान्ने, सहनशील हुन्छे । यस्ती स्त्री पनि मरणपछि स्वर्गलोकमा जान्छे । ”
Prevपैसा तिर्न नसकेर ६ महिना देखि अस्पतालमै: घर गएका बुवा फर्केर आएनन्, दाइले गरे देहत्याग
Nextसोचनै नसक्ने गरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य हेर्नुहोस